युनियन हाइड्रोको नाफा १ करोड ७४ लाखभन्दा बढी - Aarthiknews
काठमाडौं । युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौंथो त्रैमासमा रू. १ करोड ७४ लाख २४ हजार खुुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस अवधिसम्म रू. १ करोड ७० लाख ९२ हजार घाटामा रहेको यस कम्पनीले गत वर्ष भने नाफा आर्जन गर्न सफल भएको हो ।
साउन २७ गते वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको कम्पनीले रू. ७ करोड ६४ लाख ४५ हजार विद्युत विक्रीबाट आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्ष रू. ७ करोड १८ लाख ४२ हजार रहेको थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष विद्युत विक्री आम्दानी ६ दशमलव ४० प्रतिशत बढी भएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २२ के.भी. प्रसारण लाइनमा बारम्बार आईरहने समस्याका कारण विद्युत उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको कम्पनीको भनाई छ । यस कम्पनीद्वारा प्रवर्दित मिदिम खोला जलविद्युत आयोजनाले सन्तोषजनक रुपमा विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ७५ करोड रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष रकम भने रू. ७ करोड ७१ लाख ९३ हजार ऋणात्मक रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा ऋणात्मक रकम रू. ९ करोड ४५ लाख १४ हजार थियो ।
कम्पनीले रू. १५ करोड ९५ लाख १८ हजार कर्जा लिएको छ । यो कर्जा रकम अघिल्लो वर्ष रू. १८ करोड ९५ लाख १८ हजार थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष कर्जा रकममा १५ दशमलव ८३ प्रतिशत कमि आएको छ । गत वर्षको चौंथो त्रैमाससम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २ दशमलव ३२ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ८९ दशमलव ७१ रहेको छ ।